သင်သည်သင်၏ PAYPAL ကအကောင့်အရေအတွက်ကဘယ်လိုသိသလဲ - PAYPAL က - 2019
ဒါကြောင့်ကို Microsoft Windows 10 ရက်နေ့တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သုံးစွဲသူလျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်ကျင်းပ, ပင်စုဆောင်းကြောင်း OS ကိုတိကျတဲ့ module တွေ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းမှာစတင်မိတ်ဆက်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူရဲ့ server ကိုအမျိုးမျိုးသောသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ၏ယိုစိမ့်တားဆီးဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေ software ကိုရေးကိရိယာများသည်ထင်ရှားသိရဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့ ။ program ကို w10 သီးသန့်လုံခြုံရေး - operating system ရဲ့ဖန်တီးသူအားဖြင့်သူလျှိုများ၏အများဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာ။
W10Privacy ၏အဓိကအားသာချက်မှာ tool သုံးပြီးပြောင်းလဲသွားနိုင် parameters တွေကိုတစ်ကြီးမားအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောများစွာသောအလွန်အကျွံပုံရပေမည်, သို့သော်ပညာရှင်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုအဆင့်ကို setting များကို ဆက်စပ်. အတွက်ဖြေရှင်းချက်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
W10Privacy သင်အလေးအနက်စနစ်ကအပြောင်းအလဲများအတွက်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်သည့်နဲ့အစွမ်းထက် tool ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မည်သည့် OS ကိုအစိတ်အပိုင်း / ကိုဖယ်ရှား disable လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏မှန်ကန်မှုအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိခြင်းအတွက်ကြောင့်အစီအစဉ်ကိုကကျူးလွန်ကြောင်းအားလုံးနီးပါးအရောင်းအမှတ်သားရပါမည်, နောက်ပြန်လှည်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ tool ကိုစတင်အချိန်တွင် developer ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကြောင်းတစ်ကိုင်တွယ်ရှေ့တော်၌နာလန်ထူအမှတ်ကိုဖန်တီးရန်သာလိုအပ်ပေသည်။
အခြေခံပညာ privacy settings တွေကို
W10Privacy application ကိုအဓိကအားအသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏ယိုစိမ့်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်တစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်နေရာချထားခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌သူတို့ကိုခိုင်ခံ့စေ၏ဖြစ်ပါသည်ကတည်းကပြောင်းလဲမှုအတွက်ရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်စာရင်းထဲမှာတစ်ယူနစ်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည် "လုံခြုံရေး"။ ဤတွင်အားလုံးနီးပါးအသုံးပြုသူရဲ့ privacy ကိုလျော့ချသော operating system options တွေကိုပိတ်ထားဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
အသုံးပြုသူအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အပြင်, မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှလူများကို install ဆော့ဖ်ဝဲ, အရံပစ္စည်းများနှင့်ပင်ယာဉ်မောင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုသင် tab ကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ် "ပေးပို့စနစ်များ".
အဆိုပါန်ဆောင်မှုများအမှတ်တံဆိပ် Microsoft ကတဆင့်လုပ်ရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်အပေါ် OS ကိုဒေတာတစ်ခုပြုစုသူရတဲ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့ - သီးသန့်လုံခြုံရေးအပိုင်း၏ B10 အတွက် Cortana နှင့် Bing မှ setting များကိုပေးစွမ်းသည် "ရှာရန်".
ဒါကြောင့်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးမှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏တစ်ဦးလက်ခံနိုင်ဖွယ်အဆင့်အထိအမျိုးမျိုးသောကွန်ယက်လက်လှမ်း၏စနစ်၏ parameters များကိုသတ်မှတ်ပေးရန်ဖြစ်သင့်သေချာစေရန်, ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်မည်သည့်ဒေတာပေးပို့ပါ။ ရေးသားသူ W10Privacy program ကို၌ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အထူး tab ကိုထောက်ပံ့ပေး - "ကွန်ယက်".
fine-ညှိအဆိုပါ Explorer ထဲမှာ setting များကိုပစ္စည်းများလုနီးပါးဒေတာအရှုံးဆန့်ကျင်အသုံးပြုသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အဆင့်တွင်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက် windose, ဒါပေမယ့် Windows က 10 Configure ကို Windows Explorer ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာအပိုဆောင်းနှစ်သိမ့်ပေးသည်သီးသန့်လုံခြုံရေးများ၏ B10 အတွက်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါတယ် Display ရဲ့အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
သူလျှိုနောက်ခံအတွက်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အလုပ်လုပ်အောက်မှာဖုံးစနစ်န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖုံးကွယ်နိုင်ရန်အတွက် Microsoft ကအသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ။ W10Privacy ထိုကဲ့သို့သောမလိုလားအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပိတ်ထားဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။
အင်တာနက်ကို browser များအတွက် Microsoft
browsers - အင်တာနက် access ကိုအဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုရယူရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Edge နဲ့ Internet Explorer သည်မလိုချင်တဲ့အချက်အလက်များ၏ transmission အတွက်လိုင်းများသီးသန့်လုံခြုံရေးများ၏ B10 အတွက်တူညီတဲ့ tab ကိုပေါ်ရှေးခယျြစရာသုံးပြီးအလွယ်တကူပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။
မိုဃ်းတိမ်ကို Microsoft ဝန်ဆောင်မှုနှင့် OneDrive နှင့်အတူဒေတာထပ်တူအတွက်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင် - ကသင်တစ်ဦးအထူးပြုအပိုင်း parameters တွေကို W10Privacy ကိုသုံးနိုင်သည်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူသုံးစွဲနိုင်၏ဝန်ဆောင်မှုကို Windows 10. Configure VanDrayv အလုပ်နှင့်အဆင့်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များရှုထောင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဆင်ပြေပေမယ့်မလုံခြုံပါတယ်။
အဆိုပါ Task Scheduler အဆိုပါအထူးပြု OS ကို module တွေကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်အလုပ်အသုံးပြုသူရဲ့ privacy ကိုလျှော့ချနိုင်သည့်သီးခြားအစိတ်အပိုင်းကိုသတ်မှတ် 10 default အနေနဲ့စတင်, windose ။ လုပ်ရပ်တွေကိုလုပ်နိုင် tab ကို၏စီစဉ်ထားစနစ်၏ကွပ်မျက် Disable "Tasks ကို".
setting များကို tab ကိုပြောင်းခြင်း "Tweaks လုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့" ဒါဟာနောက်ထပ် W10Privacy အခွင့်အလမ်းများကိုမှစွပ်စွဲရပါမည်။ Operating System အစနိဒါန်းအဘို့ program ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းပြင်ဆင်ချက်များ, ရေးသားသူသာမန်အားဖြင့်သူလျှိုဆန့်ကျင်အသုံးပြုသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အဆင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးပေမယ့်ချော-ညှိဖို့နဲ့အချို့သောအတိုင်းအတာအထိမြန်နှုန်းအထိခွင့်ပြုပါက 10 windose ။
firewall ကို setting များကို
အဆိုပါ tab ကိုပေးအခွင့်အလမ်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် "Firewall ကို"က The အသုံးပြုသူကို Windows 10. အတွက်ပေါင်းစည်း Firewall ကိုထို့ကြောင့်က OS နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းအတွက်သံသယရှိသူတွေနဲ့ installed နီးပါးအားလုံးယူနစ်ကစေလွှတ်ကြောင်းအသွားအလာပိတ်ဆို့ဖို့ဖြစ်နိုင်ဒဏ်ငွေ-ညှိဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
Windows ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အစီအစဉ်၏အသုံးပြုမှုကိုလိုအပ်ပါကနှင့်၎င်း၏ဖယ်ရှားရေးပင်ဒေတာဆုံးရှုံးခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထည့်သွင်းစဉ်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိ, က system ကိုလုံခြုံမှဖြစ်နိုင်လျှင်, နောက်ခံအတွက်အထူးသဖြင့်အစိတ်အပိုင်းကို disable ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် applications များ၏တာဝန်ခံ၏အဆင့်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ တားစီးဖို့သီးသန့်လုံခြုံရေး tab ကို၏ B10 အတွက်နောက်ခံဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အပြေးတစ်ဦးချင်းစီပလီကေးရှင်းစစ်ဆင်ရေးကိုအသုံးပြုသည် "နောက်ခံ applications များ".
ထုံးစံ applications များ
operating system ကိုတပ်ဆင်ထားသော module တွေ, အပြင်, အသုံးပြုသူအပေါ်သူလျှိုဝှက်ထားအလုပ်လုပ်တဲ့ application များအားဖွငျ့ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် Windows အ Store မှအပါအဝင်ရရှိခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်များအတွက်တူရိယာ၏အထူးအပိုင်း၏အမှန်ခြစ်အတွက် alignment ကိုအမှတ်အသားများကိုသုံးနိုင်သည်ဖယ်ရှားပါ။
System ကို applications များ
သင့်လျော်သော tab ကို အသုံးပြု. W10Privacy ဖယ်ရှားပစ်ရန်လွယ်ကူပြီးစနစ်က application ကို အသုံးပြု. အသုံးပြုသူကို install အစီအစဉ်များ, အပြင်၌။ ထိုသို့စနစ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များများ၏အဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့, ဒါပေမယ့်လည်း operating system ကို disk space ကို PC မှာကသိမ်းပိုက်လျှော့ချရန်သာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
configuration ကို Save
windose ပြန်လည်နှင့်လိုအပ်ပါကမျိုးစုံကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် W10Privacy ကိုအသုံးပြုဖို့ပြီးနောက်ကြောင့်နောက်တဖန်အတွက် configuration tool ကို setting များကိုထုတ်သယ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ လျှောက်လွှာ setting များကိုအဆုံးအဖြတ်ပြီးတာနဲ့သင်ကအထူး configuration ဖိုင်ရှိဆက်တင်ကိုကယျတငျနိုငျနှင့်အချိန်အရင်းအမြစ်များကိုဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲ, အနာဂတ်ကာလ၌အသုံးပြုပါ။
ထည့်သွင်းစဉ်းစား W10Privacy လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြီးသွားပါက applications တွေကိုအသုံးပြုသူအပြည့်အဝလည်ပတ်မှုစနစ်၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုရေးသားသူများ၏အလိုဆန္ဒသတိပြုသင့်ပါတယ်။ သငျသညျသင့်လျော်သော interface ကိုဒြပ်စင်ကျော် mouse ကိုပျံဝဲသည့်အခါ option တခုစီ၏တစ်ဦးကအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နီးပါးချက်ချင်းပေါ်လာသည်။
သီးသန့်လုံခြုံရေးများ၏ B10 အတွက် parameter သည်၏ system ကိုသက်ရောက်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏အဆင့်အရောင် illumination နာမကိုအမှီ option ကိုအသုံးပြုပြီးဆုံးဖြတ်သည်။
အင်္ဂါရပ်များတစ်ဦးကကြီးမားစာရင်းဖြစ်သည်။ သိသိသာသာလျှို့ဝှက်၏အဆင့်အတန်းကိုထိခိုက်သောသူအပေါင်းတို့သည်အစိတ်အပိုင်းများ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှု module တွေပိတ်ထား / uninstall လုပ်ဖို့စွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေး;
စနစ်ဒဏ်ငွေ-စာများအတွက်အပိုဆောင်း features တွေ,
သတင်းအချက်အလက်နှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကို;
အရင်ကဆိုရင် applications များအားဖြင့်အသုံးပြုမှုကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ရလာဒ်ကဒိနှင့်အကြံပြုချက်များမရှိခြင်း။
သူ့ဟာသူအတွက်အသုံးပြုသူများအတွက် Microsoft ကများကစောင့်ကြည့်တားဆီးဖို့အားလုံးကိုရရှိနိုင်ဖြစ်နိုင်ခြေတင်ဆောင်ကာအစွမ်းထက် tool ကို, application များနှင့်တစ်ဦးကို Windows ပတ်ဝန်းကျင်၌မိမိတို့လုပ်ရပ်များထုတ်လုပ် - W10Privacy ။ စနစ်အထဲကယူသွားတတ်၏ဖွင့်သတ်မှတ်လျှို့ဝှက်မှုအဆင့်အတန်းပေါ် operating system ကိုနီးပါးမည်သည့်အသုံးပြုသူများ၏ဆန္ဒကိုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။
အခမဲ့ W10Privacy Download
Windows 10 ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေး Fixer Windows ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေး Tweaker 10 Up ကို Shut Windows 10 ကိုများအတွက် Ashampoo AntiSpy
w10 သီးသန့်လုံခြုံရေး - သင်ပြင်သာပြောင်းသာနှင့်အပြည့်အဝမယ့် Microsoft ကဆာဗာတွင်ဒေတာအမျိုးမျိုး၏ယိုစိမ့်တားဆီးဖို့ operating system ကို configure လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု Multi-functional ဖြစ်စေကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
System ကို: Windows 10 ကို
ရေးသားသူ: Bernd Shuster
Size ကို:2MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: Google Search က အသပခငဖင PDF ဖငမကသ ရခင (စက်တင်ဘာလ 2019).